Puntland oo Heshiis dhex-dhigaysa Farmaajo & Axmed Madoobe.
October 18, 2019 Farah Abdikadir Mohamed 1
BOOSAASO(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo kasoo laabtay dawlad gobaleedka Jubbaland shalay ayaa sheegay in maalmihii uu joogay uu dadaal badan ku bixiyey sidii meelmar looga dhigi lahaa dibu heshiisiin Waarta oo bulshadu ay yeeshaan, isagoo sheegay in ay kulamo la yeesheen qeybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in la dhameyn doono khilaafka u dhaxeeya Jubbaland iyo dawladda Faderaalka Soomaaliya, isagoo sheegay in dadaal kasta oo ay doonayaan in lagaliyo qorshahan ay ka dhigi doonaan mid meelmar ah.
“Puntland waxaa ay diyaar u tahay inay maamul goboleedyada oo dhan inay garab istaagto sida aad horay u ogeydeen,doorweyn ayaana ka qaadaneynaa,waxana rajeynayaa in khilaaf kasta oo taagan sigaar ah kan u dhaxeeya dowladda & jubbaland in laga gudbi doono, laba qof ayaa hadda ii muuqdo balse an miisan ku laheyn Kismaayo ayuu yiri” Siciid Deni.
Waa muhiim in ay heshiiyaan Ina farmaajo iyo Axmad madoobe.Ayana waa muhiim kale in ay soomaali oo dhana wada heshiiso.War waynuu u jeednaa in uu aad u badan yahay cadawqga soomaali iyo soomaaliyaba.